Tononkira 8: 1-14
Tononkira 7 Tononkira 8
Enga anie ka ho tahaka ny anadahiko, izay ninono an'ineny, hianao! Dia ho nahita anao teny ala-trano aho ka ho nanoroka anao. Eny, tsy ho azon'olona notevatevaina aho.
Dia ho entiko ka hampidiriko ho ao an-tranon'ineny hianao, Ary hampianarinao aho; Hampisotroiko divay noharoharoan-javamanitra mbamin'ny ranon'ampongabendanitro hianao.
Aoka hanondana ahy ny tànany ankavia, Ary aoka hanohona ahy ny tànany ankavanana.
Mampianiana anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema: Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony.
Iza moa iry vehivavy miakatra avy an-efitra, Mitehina amin'ny malalany ? Teo ambanin'ny hazo poma no hazako anao; Teo no niterahan-dreninao anao, Eny, teo no nahararian'ilay niteraka anao.
Ataovy toy ny fanombohan-kase ao ponao aho Sy toy ny fanombohan-kase eo an tsandrinao; Fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, Masiaka tahaka ny fiainan-tsi-hita fahasaro-piaro; Ny lelafony dia lelafo midedadeda, Eny, lelafon'i Jehovah.
Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afon'ny fitiavana, ary ny renirano tsy mahapaoka azy; Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-tranony aza hamidy fitiavana, Dia hatao tsinontsinona izy.
Manana zandrivavy tsy mbola misy izahay; Ahoana no hataonay amin'ny zandrivavinay, Raha mby amin'izay andro hangatahan'olona azy ho vady ?
Raha manda izy, Dia hanangananay tilikambo volafotsy eo an-tampony; Fa raha varavarana kosa izy, Dia hotampenanay hazo fisaka sedera.
Mànda aho, dia toy ny tilikambo ny nonoko. Raha eo imasony dia toy ny efa mahita soa aho.
Solomona nanan-tanimboaloboka tao Bala-hamona; Nahofany tamin'olona mpiandry voly ny tanimboaloboka, Ka samy tsy maintsy mitondra sekely volafotsy arivo ho solon'ny vokatra.
Ny tanimboaloboko, eny, ilay an'ny tenako, dia eto anatrehako, Ny arivo kosa dia anao, ry Solomona, Ary ny roan-jato ho an'izay mpiandry voly.
Ry mitoetra eny an-tsaha! Te-hihaino ny feonao ireo namako; Mba ampandreneso izany koa aho.
Mandosira, ry malalako, Ary aoka hianao mba ho toy ny gazela na ny diera tanora Eny an-tendrombohitry ny zava-manitra.